Football Khabar » रियल युरोपको सबैभन्दा मूल्यवान् क्लब, बार्सिलोनाको स्थान कहाँ ?
रियल युरोपको सबैभन्दा मूल्यवान् क्लब, बार्सिलोनाको स्थान कहाँ ?
स्पेनिस रियल मड्रिड युरोपको सबैभन्दा मूल्यवान् क्लब बनेको छ । एक रिपोर्टअनुसार यो सिजन ठूला उपाधिमा ‘नील’ बने पनि रियल युरोपका शीर्ष क्लबमध्ये सबैभन्दा धनी र मूल्यवान् ठहर भएको हो ।
‘केपिएमजी’ नाम संस्थाले ‘फुटबल क्लबस् भ्यालुएसन : द युरोपियन इलिट’ नाम दिएर सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार रियलले आफ्नो खास प्रतिस्पर्धी क्लब बार्सिलोनालाई समेत पछि पार्दै सर्वाधिक मूल्यवान् क्लब बनेको हो ।
सो रिपोर्टअनुसार रियलको कूल मूल्यांकन ३२२४ मिलियन युरो छ । बार्सिलोना भने सो सूचीको टप–३ मा पनि परेको छैन । बार्सिलोनालाई जर्मन क्लब बार्यन म्युनिखले समेत पछि पारेको छ ।
सूचीअनुसार रियलपछि दोस्रो नम्बरमा इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेड छ । उसको कूल मूल्यांकन ३२०७ मिलियन युरो कायम छ । त्यसपछि तेस्रो स्थानमा जर्मन क्लब बार्यन म्युनिख छ । उसको कूल मूल्यांकन २८०८ मिलियन युरो छ ।
अनि मात्रै बार्सिलोना चौथो स्थानमा छ । बार्सिलोनाको कूल मूल्यांकन २६७६ मिलियन युरो छ । त्यसपछि इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटी पाँचौं, फ्रेन्च क्लब पिएसजी छैटौं, इंग्लिस टिम चेल्सी सातौं, इटालियन युभेन्टस आठौं, इंग्लिस क्बल आर्सनल नवौं र अर्को इंग्लिस क्लब लिभरपुल दशौं नम्बरमा रहेका छन् ।
कूल ३२ टिमलाई राखेर तयार पारिएको रिपोर्टमा कूल ३५.६ बिलियन मूल्यांकन भएको छ । गत वर्ष ३२ नै टिमको मूल्यांकन ३२ बिलियन मात्रै भएको थियो ।
प्रकाशित मिति १४ जेष्ठ २०७६, मंगलवार १५:४८